हिमाल पोस्ट « Himal Post | Online News Revolution
नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ कैलालीद्धारा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
कैलाली । नेपाल फोटो पत्रकार महासंघ कैलाली शाखाको आयोजना र धनगढी डाईग्नोस्टिक्स एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.ली धनगढीको सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । महासंघले शनिबार आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रमबाट
घोडाघोडीमा ३२ जनामा कोरोना पुष्टि , कुन वडामा कति ? हेर्नुहोस् !
विशाल पाण्डेय / कैलाली –घोडाघोडी नगरपालिकामा थप ११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाण्डौंमा भएको परीक्षणमा थप ११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
घोडाघोडी अस्पतालका अध्यक्ष सापकोटाद्धारा क्वारेन्टाइनमा मास्क वितरण
कैलाली । जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिको विभिन्न वडामा मास्क वितरण गरिएको छ । विश्व भरी फैलिरहेको कोरोना भाईरस संक्रमणको रोकथाम तथा यस बाट जोगिन सुखडमा रहेको घोडाघोडी अस्पताल प्रा.लि.का अध्यक्ष बिष्णु
क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई खाजा खुवाउँदै युवा
सुखड,कैलाली । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका स्थित क्वारेनटाइमा बसेकाहरुलाइ खाजा खुवाउने कार्य भइरहेको छ । सामाजिक कार्यमा सक्रिय युवाहरु यो कार्यमा सक्रिय भएर लागि परेका छन । क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरलाइ नगरपालिकाले खानाको
युवा नेता चन्दको पहलमा क्वारेन्टाइनमा खाजा ब्यवस्थापन
कैलाली । कोरोना भाइरसको संक्रमण तत्काल रोकथाम हुने अवस्था नआएपछि रोजगारी तथा अध्ययनका लागि भारत गएका नेपालीहरु ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्किरहेका छन् । संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि घोडाघोडी नगरपालिकाले
राहत संकलनमा जुटे युवा, ‘मुठ्ठि दान महादान’ अभियान सुरु
कैलाली । ‘मुठ्ठी दान, महादान भन्ने’ नारा सहित जन उत्थान तथा चुरे संरक्षण विकास मञ्चले मुठ्ठि दान महादान अभियान सुरु गरेको छ । आर्थिक विपन्नता तथा क्वारेनटाइनमा बसेका ब्यक्तिहरुका लागि
नयाँ नक्साको स्वागतमा घोडाघोडीमा पनि दीप प्रज्ज्वलन गरि खुशीयाली मनाइयो
विशाल पाण्डेय / कैलाली – प्रतिनिधिसभाले निसान छापमा नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रयोग गर्ने विधेयक पारित गरेपछि देशभर खुसियाली मनाइएको छ । नेपालको संविधानको निसान छापमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा
छन्दकविताको परम्परामा अन्तर्राष्ट्रिय छन्द कवि सम्मेलन २०७७ को योगदान
उमेश प्रसाद घिमिरे वर्ण तथा मात्राको गेय व्यवस्था नै छन्द हो,भाषामा रहेको स्वर तथा व्यञ्जन ध्वनिहरूको आपसी सामञ्जस्य नै छन्द हो, वर्ण वा मात्राको सङ्ख्यात्मक निश्चित व्यवस्थिति नै छन्द हो,
घोडाघोडीमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न , ८० युनिट रगत संकलन
विशाल पाण्डेय / कैलाली – विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ र यसका कारण नेपालमा जारी लकडाउनकाबीच पनि रगतको अभाव कम हुन नदिन कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका-१ सुखडमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको
क्वारेन्टाइनमा खाजा खुवाउन जुटे युवा
विशाल पाण्डेय / सुखड,कैलाली । कोरोना भाइरसको संक्रमण तत्काल रोकथाम हुने अवस्था नआएपछि रोजगारी तथा अध्ययनका लागि भारत गएका नेपालीहरु ठूलो संख्यामा स्वदेश फर्किरहेका छन् । संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका
स्थानीय युवाद्बारा क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई खाजा वितरण
विशाल पाण्डेय / सुखड,कैलाली । घोडाघोडी नगरपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाईनमा बसेकाहरुलाई खाजा वितरण गरिएको छ । घोडाघोडी नगरपालिका-४ का स्थानीय युवाहरुले क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरुलाई मंगलबार खाजा वितरण गरेका हुन् ।
घोडाघोडीका युवा र व्यवसायीद्बारा क्वारेन्टाइनमा खाजा वितरण
विशाल पाण्डेय / सुखड,कैलाली । घोडाघोडी नगरपालिकाले निर्माण गरेको क्वारेन्टाईनमा बसेकाहरुलाई खाजा खुवाइएको छ । सुखडका केही व्यापारी तथा घोडाघोडी क्वलका युवाहरुले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुलाई खाजा वितरण गरेका हुन् । सुखडका